Xiddigaha ugu gambiska badan 2020 shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub oo la shaaciyey… (Adama Traore oo ka sarreeya Messi!) – Gool FM
(Yurub) 03 Abril 2019. Waxaa la shaaciyey xiddigaha gambiska ugu badan ka sameeyey 2020 shanta horyaal ugu waa weyn qaaradda Yurub, iyadoo Adama Traore uu ka sarreeyo qiimeynta Lionel Messi.
Adama Traore ayaa hoggaaminaya xiddigaha ugu gambiska badan shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub sanadkaan 2020, waxaana soo raaca oo kaalinta labaad ku jira kabtanka Barcelona ee Leo Messi.
Xiddiga ka tirsan Wolves ee Adama Traore ayaa sanadkan waxa uu horyaallada Yurub ka sameeyey goysmada ugu badan, waxaana loo diiwaan geliyey 49 gambis sanadkan, isaga ayaana hoggaaminaya xiddigaha ugu gambiska badan.
Kabtanka xulka qaranka Argentina iyo kooxda Barcelona oo lagu yaqaano inuu goysmada ku caan yahay ayaa kaalinta labaad kaga soo baxay qiimeyntan, kaddib markii uu sameeyey 47 gambis.
Xiddiga kooxda PSG iyo xulka qaranka Brazil ee Neymar Jr ayaa isaguna booska saddexaad ka soo muuqday xiddigaha gambiska ugu badan ka sameeyey shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub, waxaana loo diiwaan geliyey inuu shan kulan ka sameeyey 41 gambis.
Sheekada xiisaha leh ayaa waxa ay tahay in dhammaan saddexdaan ciyaaryahan ee hoggaaminaya liiska xiddigaha ugu gambiska badan shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub ay u wada ciyaareen Barcelona.
Messi hadda ayuuba ka tirsan yahay kooxda gobolka ka dhisan ee Barca, halka Adama Traore iyo Neymar Jr ay hore ugu soo dheeleen kooxda ka arrimisa garoonka Camp Nou.
Haddaba halkaan hoose ka eeg saddex ciyaaryahan ee gambiska ugu badan ka sameeyey sanadkan shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub & Kulammada ay ciyaareen:-
Adama Traore – 49 gambis (9 kulan)
Lionel Messi – 47 gambis (9 kulan)
Neymar – 41 gambis (5 kulan)
Ricardo Kaka oo doortay ciyaaryahanka fiican xiddigaha Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo